China Steel T Fence Post Ine Yakakwira Simba fekitori uye vagadziri |Zhanzhi
Kuenzaniswa neakajairwa fenzi mbiru, simbi T fenzi positi inokupa yakanakisa mhinduro yekuchengetedza zvidyarwa mufenzi yako.
Matanda eT fenzi akagadzirwa nesimbi yemhando yepamusoro.Kuenzaniswa neT fence post yakaturikwa, mapango eT fenzi ane maburi asingachinjike ekubata zvakachengetedzeka akasiyana mitsara yefenzi.T fenzi positi ine simba rakawanda, kusaita ngura, kuramba ngura, kuisirwa nyore uye hupenyu hurefu hwesevhisi, uye inoshandiswa zvakanyanya mumagadheni kana mapurazi kugadzirisa fenzi kana zvidyarwa.
1) Surface kurapwa: bhitumini dema yakavharwa, inopisa yakanyikwa marati, PVC yakavharwa, yakabikwa enamel yakapendwa, nezvimwe.
2) Rudzi: T chimiro, pasina maturu
3) Material: yakaderera kabhoni simbi, njanji simbi, etc.
4) Ruvara: rima rakasvibirira, dema, kana sezvinodiwa nemutengi
5) Ukobvu: 2-6mm
6) Kureba: 1.0m-2.5m, kana sezvinodiwa nemutengi
7) Packing: 10 pcs / bundle, 50 masumbu / pallet.
Kana ichishandiswa kugadzirisa chirimwa mubindu, ungangoda simbi T chimiro fenzi positi yehukuru hwakasiyana, kureba uye huwandu hwemakomba kukwira zvirimwa zvinoenderana.Saka tinogona kugadzirisa maererano nechikumbiro chako.
Yakanakisa mhando uye mutengo-kubudirira;
T-shaped design inoramba kukotama;
Zviri nyore kutyaira muvhu - hapana chikonzero chekuchera makomba
Kudzivirira kukuvara kwemujuru;
Simba rekubata rakasimba rakakodzera chero rudzi rwefenzi;
Kuora kwakanaka uye kusagadzikana kwemarara;
UV inodzivirira uye inoyevedza pakuonekwa;
Hupenyu hunogara uye hurefu hwebasa.
Tsigira waya ine minzwa, fenzi yemunda, nezvimwe;
Gadzirisa mafenzi akasiyana sefenzi yepurazi, fenzi yemafuro, fenzi yepurazi rehove nezvimwe;
Gadzirisa zvirimwa zvakaita sematomatisi, mazambiringa nemiti;
Fenzi dzinodzivirira migwagwa mikuru nemigwagwa.